Ny momba ny homamiadana amin'ny alika | Tontolo alika
Ny homamiadana dia aretina mahatsiravina izay tsy ny olombelona ihany no misy fiatraikany, fa koa ireo sakaiza volom-borona malalantsika. Raha tsy voatsabo ara-potoana dia matetika tsy tsara ny vinavina, ka izay no maha-zava-dehibe ny manatona mpitsabo vonjy raha vao mahatsikaritra fa misy zavatra ao amin'ny vatan'ny alika izay tsy tokony ho eo.
Na izany aza, indraindray dia tsy mora ny mahafantatra raha tena zavatra tokony hampanahy na tsia izany. Ka, Holazainay aminao hoe inona avy ireo soritr'aretina sy fitsaboana homamiadana amin'ny alika.
2 Karazana homamiadana izay misy fiatraikany amin'ny alika
3 Inona no antony?
6 Inona ny androm-piainan'ny alika voan'ny homamiadana?
Ny homamiadana no anarana mahazatra anomezana aretina mihoatra ny 100, izay samy mampiavaka azy avokoa fizarana sela tsy voafehy. Rehefa mitranga izany dia tsy maty ny sela antitra rehefa tokony hanao izany ary manomboka manana sela vaovao kokoa noho ny ilainy ny vatana. Ireto farany dia ireo izay miafara amin'ny famoronana lamandy iray izay antsointsika hoe fivontosana, izay mety hanimba na hanimba.
Ny fivontosana volo dia tsy homamiadana, tsy mampidi-doza ilay biby voan'ny aretina; Etsy an-danin'izany, ireo maloto dia manao izany, satria afaka manafika tavy akaiky ihany koa izy ireo, ka mamokatra metastasis.
Karazana homamiadana izay misy fiatraikany amin'ny alika
Ireto misy karazana homamiadana izay misy akony amin'ny alika:
Kansera amin'ny ratra: misy fiantraikany amin'ny vehivavy indrindra izay tsy natsipy alohan'ny hafanana voalohany.
Ny homamiadan'ny hoditra: ateraky ny fiposahan'ny masoandro.
Osteosarcoma: karazana homamiadan'ny taolana izy io. Misy fiantraikany amin'ny alika lehibe sy goavambe izany.
lymphoma: mipoitra ao amin'ny lymph node na rafitra lymphatic.
Misy antony marobe amin'ny fisehoan'ny fivontosana amin'ny alika, ny ny mahazatra indrindra ity manaraka ity:
Fomba fiaina mipetrapetraka
Sakafo mahantra amin'ny antioxidants
Fijaliana be loatra amin'ny tara-masoandro tsy voaaro
Zava-dehibe tokoa ny hijerentsika ny alikantsika isan'andro mba hahitantsika ny soritr'aretin'ny aretina. Tokony ho ao an-tsaina fa ny famaritana mialoha ny aretina dia hanampy ny biby ho sitrana kokoa.
Noho izany, tsy maintsy fantatrao izany Ny soritr'aretin'ny homamiadana amin'ny alika dia ny tazo, fanaintainana, fivontosana amin'ny faritra sasany amin'ny vatana, malemy ary / na osa ny tongotra, ny fisian'ny vongan-tany hafahafa, very lanja sy fahazotoan-komana ary tazo..
Vantany vao hitantsika ny iray amin'izy ireo, dia hoentintsika haingana any amin'ny vet. Eo izy ireo no handinika anao ary hanao fitsapana vitsivitsy, toy ny fitsapana ra sy urin, taratra X, biopsy ary / na ultrasound hahafahana manao diagnostika matihanina.
Miankina betsaka amin'ny antony sy karazana homamiadana anananao ny fitsaboana. Fa mba hanomezana hevitra antsika dia mety hisafidy ny:
fitsaboana simika- Omeo fanafody hamono ny sela mararin'ny homamiadana sy / na hanakanana azy ireo tsy hiparitaka.
fandidiana: manala ny vongana. Raha ao amin'ny taolana ity fivontosana ity dia asaina manapaka ny rantsambatana.
MAHADOMELINA: analgesika, fanamaivanana ny fanaintainana; ary ny hafa izay hanampy ny hery fiarovan'ny vatana hiady amin'ny homamiadana.
Ny fitsaboana dia eo anelanelan'ny 400 sy 2000 euro eo ho eo, ao anatin'izany ny fitsapana diagnostika sy ny fitsaboana.
Inona ny androm-piainan'ny alika voan'ny homamiadana?
Hiankina betsaka amin'ny karazana homamiadana sy ny fotoana nanaovana ny diagnostika. Araka izany, raha tara ny andro, rehefa efa nandroso be ianao dia ho fohy dia fohy ny fiainana, volana vitsivitsy monja; raha tsy izany dia afaka miaina mandritra ny taona maro ilay biby nefa tsy manana olana.
Ka alohan'ny hanaratsiana ny toe-javatra dia tsara kokoa ny manatona vetivety ny mpitsabo mpanampy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Inona avy ireo soritr'aretina sy fitsaboana ny homamiadana amin'ny alika?
Mampiavaka sy fikarakarana ny albino Doberman
Inona no tokony hataoko raha mitady hanafika alika hafa ny alikako?